ubusazi: ungasika i-microsim kwi-nanosim ngokwakho
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba ubusazi: ungasika i-microSIM kwi-nanoSIM ngokwakho
Ngee-smartphones ziba zincinci kwaye zihambelana ngakumbi, lonke iqhezu eligqithisileyo le-intshi lisikiwe ukwenza indawo yezinto ezifanelekileyo.
Esinye sezixhobo zezi SIM khadi: iinkampani ezine-Apple ngaphambili ziye zatyhala i-miniaturization ye-SIM khadi kwaye thina & apos; sikhawuleze semka kwi-SIM khadi yesiqhelo (ngobuchwephesha, ziipos zaziwa ngokuba yi 'mini SIM') kwi Imigangatho ye-microSIM, kwaye kwiminyaka yakutshanje, kumgangatho wekhadi le-nanoSIM.
Ukuba uphucula ukusuka kwiminyaka emibini ukuya kwifowuni entsha, unokufumanisa ukuba i-microSIM yakho yakudala ayihambelani nekhadi elitsha nanoSIM yekhadi. Ke ngoku wenzantoni? Esona sisombululo sixhaphakileyo kukuya kwivenkile yenethiwekhi kwaye ubuze umthengi ukuba asike i-microSIM yakho kwi-nanoSIM (kwaye ufumane iadaptha enokukuvumela ukuba ufake i-nanoSIM ukuyiguqula ibuyele kwi-microSIM, ukuba ufuna njalo).
Ukuya evenkileni kwaye ulinde emgceni, nangona kunjalo, kunokuba ngamava amade kwaye adinisayo. Kungenxa yoko le nto unolunye ukhetho: unokusika ngokulula iplastiki egqithisileyo ukwenza uguquko lwe-DIY ye-microSIM yakho kwi-nanoSIM ungasebenzisi nto ngaphandle kwesikere esidala. Kuya kufuneka ukhokelwe ngumgaqo omnye olula: usike ujikeleze imiphetho kwaye ungazisiki izihlanganisi eziqhelekileyo ezinombala wegolide embindini (yile nto iyisebenzisayo ifowuni ukunxibelelana nenethiwekhi). Sukuba nexhala ukuba kuya kufuneka usike nje icandelo elincinci lesahlulo esimibalabala- ungaziniki mgama kakhulu. Isiphumo sinokungakhangeleki sihle njengawe kwaye ungasifumani ngesisiki seSIM, kodwa ukuba ufuna ngenene yenze ngokukhawuleza kwaye ungabinazo izixhobo, okanye ixesha lokuzilindela, ungayenza ngokwakho. Apha ngezantsi, sikubonisa umzekeliso wendlela imigangatho yeSIM khadi eyahlukileyo ebonakala ngayo.
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo:Gcina ukhumbula ukuba ukuba awulumkanga kwaye usike ngokunzulu kwicandelo elinemibala leSIM ungonakalisa iSIM khadi yakho kwaye unokufuna ukubhatala ukuze ufumane umntu ophetheyo.
Ithetha ukuthini i-samsung korean
I-wifi hotspot yasimahla yokunyusa iselfowuni
Uyiphucula njani iNkqubo yokuZenzekelayo yovavanyo ukusukela ekuqaleni?
I-Apple iPhone 12 mini vs iPhone 11
I-Apple iqala ngenkqubo yokutshintsha ikhamera ye-iSight kwiiyunithi ezithile ze-Apple iPhone 6 Plus
Uwuvula njani umboniso we-120Hz kwi-Samsung S & amp; s Galaxy S20, Plus kunye ne-Ultra
I-Samsung Galaxy Tab S7 + vs Apple iPad Pro: iipilisi ezilungileyo
Eyona meko ye-kickstand ye-Samsung Galaxy Note 8